Iberibe Jade dị ka Buddha a na-achị ọchị na-ejikarị omenala ndị China; a na - ekwu na ha na - ewetara ndị weghaara ọchichị na obi ụtọ mgbe ha na - ewepụ ume na mmụọ ọjọọ.
Ahịa Dị Oké Ọnụ Ahịa: 14 Karat Gold (mgbapụta mgbapụta)
Gemstone: Jade (Adị A)
Size Pendant: 0.875 "(Height) x 0.960" (Ogologo)
Nha niile dị mma.
Ọrụ Ndị Ahịa Dị egwu
Ebu m ụzọ nye iwu ihe pendant na-enweghị, mana Kevin, si popular jewelry mesiri m obi ike maka nkwụghachi m ma nye aka nyere m aka bulie ihe dị mma nke kwekọrọ n'ihe m na-achọ. Enwere m obi ekele maka nzaghachi na nlebara anya na nkọwa zuru ezu; ihe pendant ahụ zuru oke. Ma oge ọzọ m nọ na NYC a ga m ejikọrọ onwe m kwụpụ n'otu oge a!
Kpamkpam ịtụnanya! Ana m enweta ọtụtụ mkpesa. Nkwukọrịta ama ama na nnukwu mbupu ọsọ ọsọ. Ọ ga-esoro zụọ ahịa.